पाल्पा । १६, जेठ । ०७८
कोरोना संक्रमणको दोश्रो चरणमा पाल्पाका स्थानीय सरकारहरुले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गरेका कामहरु र योजनालाई हामीले अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौं । रैनादेवी छहरा गाउपालिका गाउपालिकाका अध्यक्ष राम बहादुर कार्की संग पाल्पापाटीका सम्पादक विष्णु घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित एक अन्तर्वार्ताः
रैनादेबी छहरा गाउपालिका पाल्पा पनि कोरोना संक्रमणको दोश्रो स्टेजमा अन्त्यन्त प्रभावित बन्न पुग्यो । हामीले गाउपालिकामा १ वटा कोरोना अस्पताल निर्माण, होम आइसोलेसनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने काम गरयौ । साथै अक्सिजनको अत्यान्त अभाव रह्यो हामीले त्यतातिर विशेष ध्यान दिएर अक्सिजनको जोहो गरयौं । कोरोना परीक्षको दायरालाई फराकिलो बनाउदै गाउगाउमा परीक्षण, एम्बुलेन्स तथा सरकारी सवारीसाधनमा कोरोना बोक्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
धन्यवाद विष्णु जी, हामीले गाउपालिकाको छहरामा एउटा कोभिड अस्पताल बनायौं, जसमा ८ वेड रहेका छन् । उक्त अस्पतालमा १ जना मेडिकल अधिकृत, २ जना स्टाफ नर्श, १ जना कार्यालय सहयोगी सहित व्यवस्थापन गरेका छौं । उक्त अस्पताल निकै फलदायी पनि रह्यौ, अन्य ठूला भनिएका अस्पतालहरुले भर्ना नलिएर विरामी मर्ने अवस्थामा हामीले ज्यान वचाउन सहयोगी सिद्य बनाएका छौं । डाक्टर तथा नर्शहरुले डिउटी रोष्टम बनाएर काम गर्नुभएको छ । हाम्रो कोरोना अस्पतालमा बस्नेहरुलाई जिल्लाको सामाजिक श्रोत विकास केन्द्र मार्फत विरामी र कुरुवाको लागि दैनिक ८ सय बरावरको खाना व्यवस्थापन समेत गरेका छौं ।
रैनादेवी छहरा गाउपालिकाले संचालन गरेको कोरोना अस्पताल
अहिले गाउपालिकामा अक्सिजनको व्यवस्था के कस्तो छ ?
रैनादेवी छहरा गाउपालिका पाल्पामा अक्सिजनको अभाव छैन् । हामीले ३ वटा अक्सिजन कन्सटे«टर र २१ वटा सिलिण्डरको व्यवस्था गरेका छौं । गाउपालिकामा अक्सिजन अभाव छैन् । अक्सिजन नभएर ज्यान गुमाउनु पर्देन । अझ हामीले अक्सिजन उत्पादन गर्ने कन्सटे«टरको लागि विद्युत अभाव नहोस भनेर जेनेरेटरको समेत व्यवस्था गरेका छौं ।
रैनादेवी छहरा गाउपालिकाले संचालन गरेको कोरोना अस्पतालमा ब्यवस्था गरिएको अक्सिजन कन्सटेटर
हामीले रैनादेवी छहरामा एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । साथै गाउपालिकाको आफ्नै गाडी पनि कोरोना संक्रमितलाई बोक्नका लागि प्रयोग गरेका छौं । अहिले २ वटा सवारीसाधनहरु कोरोना संक्रमितहरु बोक्नका लागि प्रयोग भएका छन् । एम्बुलेन्सबाट हामीले गाउपालिका भित्र मात्र नभई अन्य अस्पताल पुरयाउदाको पनि निशुल्क व्ववस्था गरेका छौं । सवारीचालकहरुलाई पीपीई सेट तथा अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्री दिएर काममा लगाएका छौं । हाम्रो गाउपालिका भित्रका कुनै पनि संक्रमितहरु जुन सुकै अस्पताल जान पनि निशुल्क एम्बुलेन्स चलाएका छौं । यहाँसम्मकी होम आइसोलेसनमा बसेर निको भएका विरामीको एक्सरे गर्न अन्य अस्पताल जादा समेत शुल्क लिएका छैनौं ।
रैनादेवी छहरा गाउपालिकाले गाउपालिकाको १ वटा र एम्बुलेन्स १ वटा गरी २ वटा सवारीसाधनहरु कोरोना संक्रमित बोक्नका लागि व्यवस्था गरेको छ ।
रैनादेवी छहरामा कोरोना परीक्षणको दायरा कस्तो छ ?
यस गाउपालिकामा सायद जिल्लामै धेरै संक्रमित भएका पालिकामा पर्छ । हामीले कोरोना परीक्षणलाई फराकिलो दायरामा राखेका छौं । अहिलेसम्म ४ सय वढी पीसीआर र १ सय जती एन्टिजेन परीक्षण गरेका छौं । अहिले पनि टोल टोलमा परीक्षणको क्याप चलाएका छौं । लक्षण देखिएका तथा शंका लागेका जो कोहीको पनि परीक्षण निशुल्क गरिरहेका छौं ।
धन्यवाद । हामीले होम आइसोलेसनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेरेका छौं । अन्य स्थानबाट आउनुभएका होम आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ, हामीलाई खवर गर्नुहुन्छ । हाम्रा सम्बन्धित वडाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरु उहाँहरुको घरमा गएर स्वास्थ्य अवस्था बुझनुहुन्छ । शंकास्पद भएमा तुरुन्त परीक्षण, अवस्था असामान्य भए तुरुन्त अस्पताल पुरयाएर उपचार गरिरहेका छौं । अझ हाम्रोमा विशेष त के छ भने स्वास्थ्कर्मीले प्रत्येक दिन होम आइसोलेसनमा बसेकाहरुलाई फोन सम्पर्क गरी स्वास्थ्य अवस्था बुझनुहुन्छ अनी तुरुन्त रेस्क्यू गर्नुपर्नेमा गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्म होम आइसोलेसनमा ३ सय ५४ जना बस्नुभएको छ । हामीले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुलाई स्वास्थ्य किट उपलब्ध गराएका छौं । भिटामिन बी, सी, जिवनजल, सिटामोल, एन्टिबायोटिकहरु, मास्क, सेनिटाइजर लगायतका सामाग्रीहरु होम आइसोलेसनमा बस्ने तथा शंकास्पदहरुलाई वितरण गरेका छौं ।
कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकहरुको शव व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
हाम्रो गाउपालिकामा कोरोनाका कारण मात्र नभई यो संक्रमणकालमा अन्य कारणले ज्यान गुमाएको भएपनि हामीले सहयोग गरेका छौं । परिवारलाई ४ सेट पीपीई, आवश्यक मास्क, ग्लोब्स, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका सामाग्रीहरु प्रदान गरी सुरक्षित शव व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएका छौं ।
अहिलेपनि हाम्रो सिङ्गो टिम दिनरात नभनी काम गरेका छौं । हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरु कर्मचारी सरह नै काम गर्नुभाछ, वडा वडामा पुग्ने विरामीको अवस्था बुझ्ने समस्या परे तुरुन्त रेस्क्यू गर्ने काम गरेका छौं । अहिलेसम्म त्यस्तो जटिलता आएको छैन । हामीसंग प्रप्याप्त अक्सिजन, स्वास्थ्यकर्मीहरु हुनुहुन्छ । हाम्रो यो अभियानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारीहरु, विभिन्न संघसस्थाहरु, पत्रकार तथा देश तथा विदेशमा रहनुभएका आम नेपाली नागरिकहरुबाट सहयोग भएको छ, हामी सवैप्रति आभारी छौं ।